H CNANYA CZ Obi Anklet (14K) - Popular Jewelry
LOVE CZ Obi Anklet (14K)
Ọ ga-ahụ ihunanya ihunanya nke ụdị mgbaaka ejiji na-adọrọ adọrọ. Ihe ngosi a nwere udiri edo edo edo edo karọt 14. Anya mara mma n'oge ọ bụla, mgbaaka a nke anụ ọhịa 7.0 na-echekwa ya na mgbanaka ụda olu.
Oke dị: ogologo: 9.5 sentimita.
Oke dị: obosara: 11 mm.
Ikike dịnụ: ~ 9.1 gram *